နေပြည်တော် - မြို့သစ် - ကံပြား - မကွေး လမ်းပေါ်ရှိ စလေချောင်းတံတား တည်ဆောက်နေမှု သြဂုတ် ၉ ရက်တွင် - Yangon Media Group
မကွေး၊ သြဂုတ် ၅
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးမြို့နယ်နှင့်မြို့သစ်မြို့နယ် နယ်စပ်မိုင်တိုင်အမှတ် (၆၆/ ၄)မိုင်ရှိ နေပြည်တော်-မြို့သစ်-ကံ ပြား-မကွေးလမ်းပေါ်တွင် စလေ ချောင်းတံတားတည်ဆောက်လျက်ရှိရာ သြဂုတ် ၉ ရက်တွင်ပြီးစီးမည် ဖြစ်ကြောင်း လမ်းဦးစီးဌာန တံတားအထူးအဖွဲ့(၃)မှ သိရသည်။
စလေချောင်းတံတားမှာ သံကူကွန်ကရစ်အမျိုးအစားတံတား ဖြစ်ကာ အရှည်ပေ ၂ဝဝ၊ ကားလမ်းအကျယ် ၂၄ ပေ၊ လူသွား လမ်းအကျယ် တစ်ဖက်နှစ်ပေဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ဆောက်လုပ် ရေးဝန်ကြီးဌာန တံတားဦးစီးဌာန တံတားအထူးအဖွဲ့(၃)ပခုက္ကူမြို့မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ပုံငွေကျပ် ၅၄၅ သန်းနှင့် နွေရာသီယာယီလမ်းလွှဲပြုလုပ်ကာ တံတားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစ တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တည်ဆောက်ပြီးပြီးရင် မိုးရာသီသွားလာတဲ့ယာဉ်တွေ အဆင်ပြေ သွားလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရာသီအချိန်မီသွားလာနိုင်ဖို့ ပုံမှန်လုပ် အားထက် နေ့ညအချိန်များပါ စက်အားလုပ်သားအင်အားပိုမို ဖြည့်တင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ ယခုလို အချိန်မီပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု တံတားဦးစီးဌာနတာဝန်ခံအင် ဂျင်နီယာဒေါ်အေးမိစံထံမှ သိရသည်
အဆိုပါတံတားပေါ် ကတ္တရာ ခင်းခြင်းနှင့် ချဉ်းကပ်လမ်းအား မြေကြီးတာပေါင်ဖို့၍ ကတ္တရာလမ်း ခင်းပေးခြင်းကို မကွေးမြို့နယ် ဆောက်လုပ်ရေး၊ လမ်းဦးစီးဌာနမှ တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေ ငွေကျပ် ၃၅ ဒသမ ၆၇၅ သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နေပြီး စလေချောင်းတံတား၏ ချဉ်းကပ်လမ်းတစ်ဖက် တစ်ဖာလုံစီ ကားအသွားအလာများ အမြန်သွားလာအဆင်ပြေစေရန် ချဉ်းကပ်လမ်းအား သြဂုတ် ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးပြီးပြတ်အောင် ကတ္တရာခင်းခြင်းအမြန်လုပ်ဆောင်နေ ကြောင်း လမ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာဒေါ်တင်တင်ဝင်း၏ ပြောကြားချက်အရသိရသည်။
နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ဖြစ်ပွားတတ်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဆ?
မြန်မာ ယူ-၁၆ အမျိုးသမီးအသင်း အာရှခြေစစ်ပွဲ ပထမပွဲစဉ်တွင် မလေးရှား ယူ-၁၆ အမျိုးသမီးအသင်းကို ??
‘ဘော်ဘော်ကထှော်’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ဇူလိုင် ၁၃ ရက်မှ စတင် ရုံတင်ပြသမည်